Randrianambinina Alphonse : « Tokony hiala ny filoham-pirenena » | NewsMada
Randrianambinina Alphonse : « Tokony hiala ny filoham-pirenena »
Hentitra sy nahitsy. « Misavoritaka ny fiainam-pirenena noho ny afitsoky ny mpitondra. Tsy misy ny fanarahan-dalàna fa itsakitsahina izany, hatramin’izao. Samy manao ny saim-pantany koa ny ao anaty fitondrana rehetra. Vokany, mivaralila tsy mandeha amin’ny laoniny ny fiainam-pirenena. Nantenain-kanirina ny filoha kanefa, mampivandravandra… Tsy mahafehy ny eo ambany fifehezany izy satria mpitari-bato vilam-bava.. Aminay, tokony hiala ny filoham-pirenena », hoy ny depiote teo aloha, Randrianambinina Alphonse, ny fiandohan’ny herinandro teo tetsy Andravoahangy Ambony.
Nohamafisiny fa tena ohatra ratsy ho an’ny hafa sady efa tsy to teny na aiza na aiza intsony izao fitondrana izao. Fantatry ny rehetra rahateo, ary mahatsapa tena ihany izy ireo fa tsy voafidim-bahoaka amin’ny tena maro anisa. Nohitsin’ity mpikambana eo anivon’ny Herin’ny fanovana ity fa karazan’ny niteniteny foana ihany tamin’ilay fandaharany « Fotoam-bita » farany teo ny filoha Rajaonarimampianina raha niresaka ny lozam-pifamoivoizana teny Ankazobe ka nilaza ny handray fepetra hentitra amin’ireo tsy mahavita ny andraikiny. « Zava-boalazany tamin’izany fa tokony hametra-pialana ireo tsy mahafehy andraikitra. Ka iza no tompon’andraikitra ? », hoy indray izy.
Tsy mahafehy fitantanana firenena ny mpitondra
Ankoatra izany, efa feno ilay vola sandoka amin’ilay vao navoaka any Nosy Be amin’izao fotoana izao ka mampiahiahy. Nanteriny fa efa porofo ny tsy fahafehezan’ny mpitondra ny firenena izany rehetra izany. Teo koa ny tsy fahafehezana ny olan’ny Jirama, ny fahantrana miavosa sy ny maro hafa. « Tokony hametra-pialana ny filoha ary aoka izy hanaja ny teniny fa tsy nahavita ny andraikiny », hoy izy.